Ogaden News Agency (ONA) – Gudida Qoxootiga Ogadenia oo caalamka u soo bandhigay qaxooti cusub oo soo galay xeryaha Dhadhaab
Gudida Qoxootiga Ogadenia oo caalamka u soo bandhigay qaxooti cusub oo soo galay xeryaha Dhadhaab
Maanta oo ay taariikhdu tahay 24/12/13 waxaa xerada qoxootiga Xagardheere lagu qabtay kulan ay kasoo qayb galeen qoxootiga ka yimid Ogadenya ee ay ka muuqato dhibaatada gaarka ah iyo Gudida Qoxootiga Ogadenia iyo qaar kamid ah warbaahinta.
Kulankan oo ay soo abaabuleen Gudida Qoxootiga Ogadenia ( OGADEN REFUGEE COMMUNITY COMMUTEE) ayaa waxaa kasoo qaybgalay TVga caanka ah ee qaranka Soomaaliyeed (Somali National TV) iyo ideecada gobolka woqooyibari kenya ee STAR FM, waxayna goobta ku waraysteen qaar kamid ah qoxootiga Ogadenia ee ay ciidamada Itoobiya u gaysteen dhibaatooyinka faraha badan iyagoo warbaahinta siinayay cadaymo muujinaya dhabaatada ay sheeganayaan ee ay u gaysteen ciidamada gumaysiga Itoobiya.
TVga iyo ideecada ayaa madasha ku waraystay dad badan oo isugu jira qaar lajidhdilay gabdho lasoo fara xumeeyay dad dadkoodii lalaayay iyo kuwo hantidoodii laga moora duugay.
Intaa kadib wuxuu TVga SONATV waraysi dheer layeeshay gudomiyaha 3da xero ee Gudida Qoxootiga Ogadenia Daahir Maxamad Cali oo TV-ga siiyay waraysi dhinacyo badan taabanaya oo khuseeyay qoxootiga S.Ogadenia ee ku sugan Dhadhaab.
Wuxuu gudoomiyuhu sheegay in ay xeryaha joogaan ilaa 2000 oo qof oo aan wali kaarka raashinka qaadanin oo Ogadenia kazoo qaxay. Dadkan faraha badan ayuu gudoomiyuhu sheegay in ay lasoo kulmeen xili ay UNHCR joojisay kaararkii ay bixinaysay. Mar wax laga waydiiyay waxa ay iyagu ka gudi ahaan dadkaas u qabtaan ayuu sheegay in ay ka caawiyaan waxyaabo badan laakiin buu yidhi waxaa caqabad nagu ah in ayna wax howl ah ka soconin hay’adaha ka shaqeeya Dhadhaab, isagoo carabbaabay in ay howl muhiim ah u hayaan qoxootiga Somalida Ogadenia ee kusugan xeryaha Dhadhaab.
Sikastaba ha ahaatee Ogaden Refugee Community Committee ORCC ayaa xowli kuwada howlaha ay bulshada u hayaan waxayn aad isugu taxalujinayaan in ay lafal galaan hay’adaha kalee caalamiga ah ee ka hawgala qaxootiga.